Deg Deg: Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo goordhaw ka badbaaday qarax – Kalfadhi
Deg Deg: Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo goordhaw ka badbaaday qarax
Xildhibaan Daahir Ammiin Jeesow ayaa warar ay heshay Kalfadhi sheegayaan inuu goordhaweed ka badbaaday qarax. Gaariga Xildhibaanka ayuuna qaraxaasi ka dhex kacay, waxaana la rumeysan yahay in walxaha qarxa loogu xiray gaarigiisa, sida ay goobjoogayaal u sheegeen Kalfadhi.
Xildhibaan Daahir, oo la hadlay Kalfadhi, ayaa si kooban u sheegay in waqtiga uu qaraxu dhacayey uu kasoo baxayey Hoteel uu gaarigu ugu hor yiilay, islamarkiina waxa uu jaray qadka. Goobjoogayaal ayaa Kalfadhi u sheegay inuu wadihii gaarigaas ku dhaawacmay goobta.
Ciidamada Ammaanka ayaa yimid goobta, oo la wareegay gaariga iyo jawiga guud ee meesha ay wax ka dhaceen. Weerarada nuucaan ah ee ka dhanka ah xildhibaanada, siyaasiyiinta, shaqaalaha dowladda, hay’adaha iyo muwaadiniin kale waa ka dhacaan Muqdisho, waxaana inta badan sheegta Al-Shabaab.
Golaha Shacabka ayaa maanta si adag uga dooday Xaqa Siyaasiga Dowladda Federalka Soomaaliya